Inay Dagaal U Soo Diyaar Garoobeen, Inay Beegsan Doonaa Leo Messi & Willian Oo U Goodiyey Barca %
Inay Dagaal U Soo Diyaar Garoobeen, Inay Beegsan Doonaa Leo Messi & Willian Oo U Goodiyey Barca
Champions LeagueEnglandLatest Sports News
By Laacib News	 On Mar 14, 2018
Xidiga garabka midig ee weerarka uga dheela Chelsea, ee Willian ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in kooxdiisa ay diyaar utahay inay udagaalanto sidii ay Barcelona, uga reebi lahayd wareega 16-ka Champions League, ayna sidaas kusoo tashteen.
Laacibkaan oo warbaahinta la hadlayay ka hor ciyaartaan ayaa wuxuu kaloo sheegay inay si gaar ah ay isha ugu hayn doonan Lionel Messi, oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid awood badan u leh inuu wax badan ka bedalo ciyaarta.
“Aad ayaan ugu farxaa marka aan arko dadka qaar oo aniga iga sheegaya wax wanaagsan, waxaana hada diirada saarayaa sidii aan wax fiican usameyn lahaa kulanka Barcelona,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay laacibkaan reer Brazil.
“Waxaan rajeynayo ayaa ah in Barcelona ay wax badan haysan doonto kubad, waxaana ubaahan nahay inaan si fiican udheelno kulanka,” ayuu raaciyey.
“Aad ayaan ugu farax-sanahay muuqaal ciyaareedka aan hada ku jiro iyo goolasha aan dhalinayo, laakiin waxaan doonayaa wax badan inaan usameeyo kooxdeyda.
“Waan xishmeynaynaa Barcelona, waa koox weyn, sida Chelsea oo kale, waxaana dooneynaa inaan qabsano shaqadeena si aan wareega xiga ugu soo baxno.
“Waxaan udagaalameynaa inaan kamid noqono afarta sare ee Premier League, sidoo kale waxaan rabnaa inaan wax qaas ah aan ka sameyno Champions League – Maskaxdeena waa mid fiican tan iyo bilowgii xagaagan, walina waan dagaalami doonaa.
“Waxaan ognahay tayada Barcelona, dabcan waxaan il gaar ah aan ku hayn doonaa Messi, maxaa yeelay waa mid wanaagsan, wuxuu ka sameyn karaa garoonka wax walba oo uu doonayo, waxaana ubaahan nahay inaan shaqsi ahaan iyo koox ahaan isku diyaarino.
“Waan daawanayey wixii dhacay sanadkii 2012, markii aan kasoo talaabsanay iyaga oo aan Final-ka imaanay, siaas darteeda kulanka maanta waa uu ka duwan yahay kaasi, waana mid aad u adag, waana inaan si fiican udheelnaa.
“Barcelona, waxaan ka rajeynayaa inay kubada haystaan wax badan, marka waxaa waajib nagu ah inaan isweydaarsi aan ku sameyno garoonka, waana inaan wax badan helnaa kubada si aan uga fogaano halisaha,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Willian.
Barcelona vs ChelseaChampions LeagueWillian
Wax Ka Ogow Xiriirada Dhaxmaray Barcelona vs Chelsea Ka Hor Kulankooda Caawa
MAQAAL: 3 Arrimood Oo Maamulka Real Ku Qasbeysa In Aysan Ceyrin Zidane Oo La Shaaciyay